Firimu Die Nhepfenyuro - China Firimu Die Series Mutengesi, Fekitori -Jwell
Musoro wekufa unotora yekuwedzera V chimiro chemvura-inodonha mhando kuyerera chiteshi, iine shunt tekinoroji uye yakakosha katatu inodzikamisa chimiro. Kugadzira rukoko uye kunatsiridza kunyatso kweiyo extrusion maitiro kubvisa 'M' chimiro uye 'W' chimiro kuyerera maitiro nenzira. Iyo yekumusoro kufa miromo uchishandisa push-off type manual -kugadzirisa zvakanaka + otomatiki-kugadzirisa-chidimbu kufa muromo, bhuku rekugadzirisa renji iri ± 1mm, otomatiki kugadzirisa renji ± 300um; Nezve iyo otomatiki inofa miromo yekugadzirisa ekudzora mativi, isu tinoshandisa parizvino yakanyatso nyatso kuvhara loop control system uye otomatiki gauging system inoita kuti ukobvu hwechigadzirwa mu ± 2% chaizvo, pa-line ukobvu gauge ndeye otomatiki inopfuurira yekuongorora kuongorora, inogona kuratidza iyo chaiyo-nguva chaiyo ukobvu kushivirira kwezvigadzirwa. Kuburikidza nepurogiramu yekomputa inogadzirisa iyo data, mhinduro kune yakakosha kufa miromo kugadzirisa bhaudhi yekuwedzera kwekushisa, uye kuona kuvhurika kweiyo kufa kwemuromo weukobvu kune otomatiki wakanaka-kugadzirisa, nekukurumidza uye inoshanda kudzora chigadzirwa ukobvu chaizvo. Uye isu tine yakanaka kufa musoro kusagadzikana, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvinowirirana neakasiyana "mukati mekuvharidzira mhando hupamhi kugadzirisa mudziyo "kana" iyo yekunze inovharira mhando hupamhi inogadziridza chishandiso ", gutsikana zvirinani mutengi zvaunoda kuti ubudirire kugadzirwa.
Musoro wekufa unokodzera kugadzirwa pasi pe5000mm, ukobvu pakati pe0.06 -0.18 mm CPP, PE, EVA, PVC, PET, PVB, PA, single-layer kana multilayer mafirimu.
PA / Pe / PP / PVC imwechete madziro, maviri-madziro erudzi pombi extrusion mutsetse